Hhayi ngaso sonke isikhathi yokudweba curls kuholela elamukelekile, ikakhulukazi uma inqubo yenziwa ekhaya. imiphumela emibi zihlanganisa reddishnesses ukubukeka. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa akubukeki ekhangayo. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ukususa izinwele reddishnesses emva ukudaya. Le nqubo kwenziwa izindlela eziningana.
Kungani kubonakala ithoni obomvu?
Reddishnesses zenzeka ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Geza kwenziwa esebenzisa izinga ezingabazisayo.
Wenza ashintshe umbala Ikhishwa we Brunette ukuze Okwamafoi okuhanjwa nawo.
Staining okwenziwe ekhaya ngaphandle ngekucikelela umbala akhawunti kanye nezici.
Akufanele ususe ithusi ithoni amakhorali. Izinto anikelwe zindlela babe isenzo obhubhisayo omnyama ensundu. Red, obomvu, osawolintshi yellow zisazohlala. Ngaphezu kwalokho, ukushintsha kombala unomphela ebhubhisa isakhiwo izinwele, ziba ziyaqothuka. Yenza kangcono nehhovisi Umbala yenkosi, njengoba kuzoba ukhethe nemoya lowemukelekako ngesisekelo isimo nombala curls. Lokhu ngeke ukuvikele ukuvela kwemiphumela emibi.
, Izinwele ensundu bleached Black
Ukuphungula umthunzi obomvu izinwele kangcono gumbi. Ochwepheshe ayoyikhetha indlela efanele esekelwe izici curls, kanye ukunikeza iseluleko sendlela ukuvimbela okuvela kuyo isici anjalo esikhathini esizayo. Ukuze zenze lo msebenzi ngokwakho, cabangela le mithetho elandelayo:
Indlela ukususa reddishnesses izinwele emva ukucaciseleka? Ukuze wenze lokhu, kudingeka kufihlwe umbala original. Kulokhu, upende kumele ukuxegiselwa ngokuziqhathanisa ithoni yemvelo kodwa mnyama ngokubomvu imicu. Le ndlela kwenza ukuqeda umthunzi ezingadingekile.
Indlela ukususa reddishnesses onezinwele ezimhloshana? Ngenxa yalesi remover ephelele ukuthi uzosusa zesandulela upende omdala. Lo mkhiqizo yezimonyo ngokushesha ugeza kude izinsalela udayi wangaphambili.
Indlela ukususa reddishnesses nezinwele ezimnyama? Udinga ukusebenzisa njalo Umbala amashampu. Ngenxa yalesi izindlela ephelele ngokunsomi, aluhlaza okwesibhakabhaka kanye amathoni.
Lahla amathoni zibomvu ukusiza imoto Isiliva, ngoba izimfanelo ezibalulekile, ukugeza off lezi zombala.
Nge umbala shades abandayo amnyama noma eliqhakazile umlotha uyoqeda reddishnesses nezinwele ezimnyama.
Indlela ukususa izinwele reddishnesses emva umbala? Ngokuvamile lokhu amashampu umbala zisetshenziswa. La mathuluzi ukunikeza izinwele ngokunakekela ithenda. Le ndlela kubhekwa ukuqeda zibomvu ithoni emnene. Izimali ezisetshenziswa ngendlela efanayo njengoba nge coloration okungafani, kodwa Upende aphethwe isikhathi eside.
Nge Umbala imoto kuyadingeka ukwenza le nqubo njalo ngemva kwamasonto amabili kuya tint obomvu kwakungelona lubonakale. Blondes kangcono ukukhetha isiliva onsomi amathoni amashampu. Brunettes bangasebenzisa imali kusuka kwempunga. Cishe zonke amashampu avumele ukuthola umthunzi abandayo ezokwenza reddishnesses obunganakekile.
izindlela Traditional ukuxazulula inkinga
Reddishnesses ukususa izinwele ekhaya ngeke usebenzisa amakhambi abantu. Nakuba abanye bangase bangahlali ngokushesha nemiphumela ebesiyilindele, kodwa ephephile. Abaningi yezingxenye lokulungiselela kwabo kuzo zonke endlini. Phuma umthunzi obomvu atholakala ngokusebenzisa izindlela ezilandelayo:
Uhlambulule usebenzisa izindlela ngesisekelo chamomile decoction kanye uviniga (esingaphansi 2 v. L.).
Kalamula ixubene imali alinganayo utshwala. Ukwakheka lisetshenzisiwe izinwele imizuzu 15-20 abese ugeze off ngamanzi. Le nqubo kususa hhayi kuphela ithoni obomvu, kodwa futhi kwenza shiny izinwele.
Summer izinwele sisetshenziswa kalamula, bese omisiwe kubo elangeni. Njengoba izinwele ke ezomile, uzodinga ukusebenzisa moisturizers.
Reddishnesses ukwazi ukususa rye encane isinkwa, okumele oyi-phisa amanzi (cishe usuku). Slurry lisetshenzisiwe izinwele futhi siyakazwe off emva 1.5 amahora.
Izindlu angasuswa kusukela umthunzi obomvu usebenzisa imaski esekelwe amaqanda, uju (1 isipuni) namafutha omnqumo (1 ihora. L.). A imaski ozofakwa ukumanzisa izinwele futhi ugeze off emva kwemizuzu engu-30.
Ukukhethwa lwesikhali sokuqaphela esifanele umthunzi upende
Indlela ukukhetha udayi izinwele, ukuze ungakwazi ukuqeda ithoni obomvu? Kuyadingeka ukucacisa isikhumba tsvetotip, amehlo, curls. Nokho, wabe efudumele futhi abandayo, futhi isihloko isehlane zinhlobo ezifana "Winter", "Spring", "Autumn", "ehlobo". abameleli uhlobo efudumele baye ezishukiwe isikhumba, oluhlaza noma brown amehlo. Futhi abesifazane tsvetotipa abandayo, esikhumbeni Kunalokho, ubisi, othi awube kancane, amehlo aluhlaza.
Lapho tsvetotip izinwele kuwa ngokuvamile obomvu, nsomi ngokubomvu. Hue kuyoba licace, uma wenza Umbala noma khetha umbala mnyama. Perfect ukukhanya onsundu, ithusi, igolide noma umbala uju-caramel. Ngayinye yalezi imibala sikhulise kahle izinzuzo ukubukeka. onsundu Khanyisa ilungele abesifazane lo tsvetotipa.
Ngezinye abameleli tsvetotipa Spring izinwele nsundu, inhlaka, ushokoledi ensundu. Penda kubo kufanele uzokhanya. Perfect segolide uju ithoni, umbala ubisi ushokoledi nogologo.
Lapho tsvetotip imicu Summer kukhona murine, ukukhanya esinsundu, udaka umlotha amathoni. Kungcono ukukhetha ngokugqamisa noma Umbala, kodwa nokusetshenziswa shades of blonde. -platinum Ayephelele, isihlabathi segolide nomhlophe. Ukuze tsvetotipa Winter nzima eyolanda upende. Curls abesifazane amathoni amnyama. Ifanele ukudaya umlotha, Auburn, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela umbala. Ngemva kokutadisha tsvetotip, ungakwazi ukuthola indlela ukukhetha udayi izinwele.
Izinhlobo inki ukumelana
Indlela ukususa izinwele reddishnesses emva umbala? Ungenza lokhu ngokuthumela kabusha umbala ushintsho inqubo. Badinga kuphela ukukhetha upende esifanele ngokuqina. It ihlukaniswe yaba izinhlobo eziningana:
Ukuqhubeka unomphela - zihlanganisa i-ammonia ne-hydrogen peroxide. Umbala siqhubeka amasonto amaningana. Upende ingasetshenziswa ubani nge obomvu, maroon, umthunzi elikhanyayo abamnyama.
Professional - aqukethe izingxenye ezithile, ukuvikela ukulimala isakhiwo. Ammonia e medium incane, nephimbo ukumelana ayiphazamiseki. Umbala lilondolozwe amasonto 5.
Semipermanent - efanelekayo ekushintsheni izinwele umbala 3 ithoni. Upende, ukupenda phezu akukho ngaphezu kuka-50% izinwele ezimhlophe. Ukwakheka kuyinto peroxide khulula kanye ammonia. Desirably zindlela ukuthola, ngemuva kokuxoxisana okuyinhloko.
Semiproof - imicu musa ilimaze isakhiwo ngenxa okuqukethwe encane ammonia. Umbala kuxhopha igcwaliswe.
Okumibalabala - lubhekwe uma esetshenziswa ulandele iziyalezo ezikuyo. Ziqukethe kungekho ammonia. Dedela kusho ngesimo amashampu futhi isimo. Ziyakwazi ekahle ukukhanya izinwele ezimnyama njengoba uhlinzeke elinemibala ekhangayo, nakuba isikhathi esifushane.
Zemvelo - Henna, Basma, oki namagxolo. Paints zisetshenziselwa ukukhiqiza obomvu, igolide noma emnyama.
Indlela ukugcina reddishnesses?
Ukuze ugweme umbuzo kanjani ukususa izinwele reddishnesses ngemva Umbala, kufanele ukuba ubambelele amathiphu zokuthi singakugwema kanjani ukubukeka umbala:
Staining kungcono ishiyelwe professional, ikakhulukazi uma ungenayo isipiliyoni. Phela, kufanele ayichaze umbala original kuya yi like inqubo. Futhi kungaba kuphela balukhulume.
Musa ukwenza izinwele siphungule bebodwa, ikakhulukazi uma besaba omnyama noma ompofu.
Kumelwe ngaso sonke isikhathi landela imiyalelo. Uma ukuhambisana nayo yonke izincomo ngesikhathi ukususa upende kusukela izinwele, le yellowness ngokuvamile livela.
Wenza ashintshe umbala wenziwa ngezigaba eziningana. Kufanele ungaceli master ukukwenza ngokushesha.
Udinga ukusebenzisa opende professional kanye oxidants. Siyabonga kubo, kuvela umthunzi efana ukuthi ekhonjiswe iphakethe ngangokunokwenzeka. Ngenxa yalokho, ungalindela umphumela oyifunayo.
Ngemva staining kubalulekile ukusebenzisa izindlela ezikhethekile anakekele izinwele, ukugwema ukubonakala reddishnesses. Imithetho Simple ukukusiza uthole ngisho, umbala umfaniswano. Kodwa ngisho noma kwakungekho umbala aphuzi, kungenzeka ukuqeda ikhambi efakazelwe.
Indlela yokwenza izinwele blonde eliqhakazile? Abane yezindlela eziphumelela kakhulu